Qaar ka mida kalluumaysatada xeebaha Puntland ayaa ka cabanaya maraakiib iyo doonyo shisheeye oo culays ku haya kalluumaysigooda.
Muuse Cali Jaamac oo ah Guddoomiyaha shirkad kalluumaysi oo lagu magcaabo KAFCO ayaa sheegay in maraakiib iyo doonyo tiro badani ay ku sugan yihiin badda, isla markaana ay qaarkood waxyeello naf iyo maalba ah ay soo gaadhsiiyeen maraakiibta iyo doonayahaasi.
Dhinaca kale, Madaxda Puntland ayaa sheegay in ciidamo ay u direen inay soo furtaan markab Afduub loogu heysto xeebta degmada Caluula ay is hor fadhiyaan raggii heystay Markabka wada hadal looga dhaadhcinayo inay si nabdoon ku sii daayaanna uu socda.
Wareysi ku saabsan cabashada kallumeysatay oo uu Ismaaciil Xuseen Farjar la yeeshay Muuse Cali Jaamac iyo warbixinta ay Faaduma Yaasiin Jaamac kasoo dirtay ciidanka ay Puntland direen hoos ka dhageyso.
Puntland oo ciidan dirtay